एउटी युवतीले दुई जना युवकसँग विहे,बिहेको फोटो देखाउदै युवकहरू “मेरो श्रीमती हो” भन्दै एकसाथ मिडियामा आएपछि.(भि:डियो सहित) – Ap Nepal
काठमाडौ । एक जना युवतीले दुई पुरुषसंग एकै दिन कसरी विवाह गर्न गर्छ । सुसन तामागं उर्लावारी, राजु लिम्बुको जिवनमा यस्तै घटना भएको छ । उनीहरुकी श्रीमतीको नाम रिमा आले मगर हो । यो संयोग नाममा मात्र होइन ति युवती एउटै हुन् । उनीहरु दुवै जनाको विवाह दर्ता छ । विवाह दर्तामा मिति एकै दिन छ ।
विवाह दर्ता गरेर पैसा लिएपछि अचानक रिमा आले हराइन् । एक जना श्रीमान रिमालाई खोज्न थाले । यसरी हिड्दा उनले रिमाकै अर्का श्रीमानलाई पनि फेला पारे । अहिले रिमाका दुई श्रीमान संगै मिडियामा आएका छन् । दुई जनाले अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनीहरुजस्तै अरु पनि रहेको थाहा पाएका छन् । हामीले अहिले सम्म ८ जना अरु युवक पनि हामीजस्तै पीडित भएको थाहा पाएका छौं ।
उनीसंग पनि विवाह भयो । यि दुवै युवकलाई रिमासंग भेट गराइदिएका हेम प्रसाद चेमजुगं हुन् । दुवै जनासंग यस्तो केटी म संग छ उ संग विवाह गरेर जाउ भनेर सल्लाह दिएको बताएका छन् । राजु लिम्बु पनि हगंहगं जाने भनेर ७० लाख रुपैयामा सम्झौता भयो । उनले एडभान्समा आधा पैसा दिए । ३० लाख आफुले दिएको बताएका छन् । पछि राजुले सोही युवतीद्धारा ठ गीएका अरु पनि भएको थाहा पाएको बताएका छन् ।
Prevआज एकाएक कल्पना दाहाल रुदै मिडियामा , आखिर किन यतिसम्म भयो त (भि,डियो हेर्नुस्)
Nextनेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस आज यस्तो छ बिदेशी मुद्राको बिनिमय दर ….
प्रतिनिधिसभा विघटनपछी प्रखर बक्ता रमेश प्रसाइको यस्तो धारणा (लाइब भिडियो)
‘दोहोरी च्याम्पि यन’ बिबाद पछि – कल्पना दाहालले पहिलो पटक दिइन् यस्तो प्रति कृया (भि डियो हेर्नुहोस्)
नायिका श्वेता खड्काले बिहेको एकदिन मात्र बाँकी हुँदा भावु;क हुँदै यसरी सम्झि,न् श्रीकृष्णलाई (भिडियो सहित)
एक रुपै;या खर्च न; गरी बिहे गरेका भा’इरल जोडीलाई, ३५ लाख भन्दा बढीले यस्तो गरे (भि,डियो सहित) (27606)